Amerika: Tsiaro an’aterineto mpifindra monina 72 tratran’ny famonoana faobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2010 19:58 GMT
Mpianatra nahazo diplaoma teny amin'ny anjerimanontolon'i Chicago aho, ary nahafaly ahy ny niara-nianatra tamin'ny mpanoratra sy mpanao gazety Meksikana Alma Guillermoprieto. Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny fanadihadiana izay nataoko niaraka tamin'i Ramatoa Guillermoprieto tamin'ny volana oktobra taona 2010.
Tamin'ny fiandohan'ny asany dia nalaza teo amin'ny mahampanao gazety azy i Alma Guillermoprieto tamin'ny fikarohana nataony mikasika ilay tantara momba ilay vono olona tamin'ny taona 1981 tao El Mozote, El Salvador, izay nahafaty tantsaha teo amin'ny valonjato teo ho eo, novonoin'ny foloalindahy avy any Salvador nandritra ny ady an-trano tany. Tanatin'ny 30 taona farany, dia nanoratra tao amin'ny gazety The Washington , The New Yorker, ary The New York Review of Books izy, nitatitra avokoa ireo, manomboka amin'i Fidel Castro, ka hatramin'i Carlos Salinas, ary koa ireo mpitarika ny mpitolona mitam-piadiana ao Colombia (FARC).
Mpitantara eny amin'ny sekoly ambony izy ary mpanao gazety nilaza fa tsy “manana fiainana amin'ny aterineto.” Fa tamin'ny roa volana farany teo, nikarakara tetikasa iray amin'ny alalan'ny aterineto ho valin'ny famonoana ireo mpifindra monina miisa 72 niseho tany Meksikan'i Tamaulipas tamin'ny volana Aogositra izy.
“Alitara virtoaly” hahatsiarovana ireo mpifindra monina naripaka Ny 72 Migrantes [es].
Marika kisarisary noforonin'i Daniel Castrejon
Toy ireo olona an'arivony teo alohan'izy ireo, nandao ny fonenany tao Ekoatera, Salvador, Goatemalà, Honduras, ary Brezila ireo lehilahy sy vehivavy ireo mba hiasa any Etazonia. Fa nifarana tao anaty tranokely fitobiana entana ny dian'izy ireo, izay zato metatra miala ny sisintany iraisan'i Etazonia-Meksika, izay nahitana fatin'olona miisa roa amby fitopolo tamin'ny faha 23 Aogositra. Maro tamin'izy ireo no notifirina avy tao amin'ny hatony. Tao anatin'ireo olona efatra izay tafatsoaka, dia ny iray tamin'izy ireo fotsiny no nanao tatitra momba io famonoana io. Telopolo tamin'ireo niharam-boina no tsy hay nofantarina akory.
Taorian'ny nahavaky barara ny vaovao mikasika io famonoana olona io, nanatona an'i Lolita Bosch i Guillermoprieto, dia ilay mpanoratra ao amin'ny Nuestra Aparente Rendición [es] izay sehatra fifanakalozan-dresaky ny mpanakanto sy ireo avara-pianarana izay miasa any na teratany ao Meksika ary tohina izy ireo mahita ny toe-java-miseho eo amin'ny firenena. Tamin'ny alalan'io vohikala io ary koa tamin'ny fahalalana olona maromaro, dia nampiantso vondrona iray misy mpanoratra maromaro izy ireo mba hanoratra mikasika ny tsirairay amin'ireo niharam-boina. Tao amin'ny Nuestra Mirada [es], vohikala iray ho an'ny mpaka sary fanao an-gazety avy any Amerika Atsimo, dia nisy ny fiantsoana mba haka sary ireo mpifindra monina. Herinandro vitsivitsy taorian'izany, dia nanolotra an-tsitrapo ny fotoanany sy ny fahaiza-manaony ireo mpanoratra, mpaka sary, sy mpamorona vohikala teo amin'ny famoronana ny 72migrantes.com.
“Te hamorona zavatra izahay mba ifandraisanay amin'ireo fianakavian'ireo niharam-boina,” hoy i Guillermoprieto , “ary hanangana vohikala iray ahatsiarovana ny andro nahafatesan'ireo namoy ny ainy”
“Ao anatin'ny vohikala iray, mitamberina amin'ny olona ny endrik'izy ireo amin'ny alalan'ny fametrahana ny sarin'izy ireo. Ampiainanareo indray izy ireo amin'ny alalan'ny fahatsiarovana.”
Nanazava ny fanehoana isan-karazany ny 72 Migrantes izy, manambara izy fa ny ampahany tsirairay avy amin'io vohikala io dia mifanaraka tsara amin'ireo ampahany maro tamin'ny fihetseham-po tsapa ka nahafinaritra tamin'ny nitsidihana an'io vohikala io “amin'ny alalan'ny sary 3-D” (eo amin'ny tena fiainana.) Tamin'ny andro namoizana ain'olona io, dia mitsidika ny takelaka misy ny havana aman-tsakaizanareo ianareo; mihira ho an'ireo lasa ianareo, mametraka voninkazo ho azy ireo, ary miara-mihinana amin'izy ireo.
Ao amin'ny 72 Migrantes, dia afaka mihaino hirahira izay natolotra ho an'ireo maty ianareo (manindry eo amin'ny ‘descargar canciones’), mametraka sarina raozy (manindry ‘dejar una rosa’), ary mizara sakafo amin'ireo mpifindra monina mbola velon'aina amin'ny alalan'ny fanolorana fanampiana (tsindrio eo amin'ny ‘donaciones’). Voarain’ ny raiamandrenin'i Hermanos en el Camino Alejandro Solalinde ny fanampiana, fikambanana iray ahitana fiangonana manolotra sakafo, trano fialofana ary fanohanana ho an'ireo mpifindra monina sy ho an'ireo izay nosamborina an-keriny sy nampitahorina tamin'ny zava-mahadomelina ary ireo mpamarotra olona ao Meksika.
Sarin'i Edu Ponces, ampahany amin'ireo sary voahangona ao amin'ny 72migrantes.com
Ny tena voarakitra ao anatin'ny 72 Migrantes dia karazana tantara sy rakitsary, misy iray avy isaky ny niharam-boina. Ireo mpanoratra (anisan'ireo Elena Poniatowska, Jorge Volpi, ary Juan Villoro) dia nanoratra mikasika ny tantaran'ireo namoy ny ainy tamin'ny alalan'ny fikarohana nataony momba ny zavatra niainan'izy ireo, matetika moa dia avy amin'ireo havana aman-tsakaizan'ireo niharam-boina ireo no nahazoana izany. Fa maro tamin'izy ireo no natahotra mafy amin'ny filazana ny anarany sy ny mombamomba azy ireo ampahibemaso. Maro tamin'ireo mpanoratra ireo, izay nahalala bebe kokoa ankoatra ny anarany fotsiny, no nanoratra tantaram-piainan'izy ireo tamin'ny fahavelony sy mikasika ny fijoroany vavolombelona. Ary ny sasany dia nisafidy ny hanoratra ny tantaran'ireo niharam-boina tsy fantatra endrika amin'ny alalan'ny mety ho fomba fiainan'izy ireo.
Hoy ny nambaran'i Guillermoprieto hoe “Ireo olona tena nasiako lanjany,” “dia ireo izay nalàna baraka eny na dia ny anarany fotsiny aza nandritra io trangan-javatra nahatsiravina io.”
Hoy izy: “Tena tsy haiko fantarina hatramin'izao ny olona mety nanao an'io. Ilay vavolombelona iray monja dia nilaza fa mitonon-tena ho mpikambana ao amin'i Zetas, vondrona fanta-daza amin'ny herisetra sy ny fandraisana zava-mahadomelina ao Meksika ireo mpamono olona. Nanazava an-tsary tsotra ny fomba famonoana olona nataon'i Zetas fahiny i Guillermoprieto—mandatsa-drà sy misetrasetra izy ireo. Tsy dia tena manaiky amin'ny fiampangana an'i Zetas izy ho tompon'andraikitra amin'ity trangan-javatra mahatsiravina ity, manohitra izany izy satria tsotra sy mazava fa ny fisehon'io famonoana olona io dia tsy mifanaraka amin'ny fomba fanaon'io vondrona io .
Toy ny voalazan'ny Meksikana iray, dia nilaza i Guillermoprieto fa nahamenatra azy io famonoana io “hoe novonoin'ny Meksikana tao Meksika ireo olona miisa roa amby fitopolo ireo.” Ho valin'izany, dia nilaza izy fa te hamorona vohikala izy izay natao hanaporofoana ny fisian'io famonoana io sy ahatsiarovana ireo niharam-boina. Ary maniry ny hanorina toerana iray izy mba ahafahan'ny vahoaka ao Meksika sy manerana ny Amerika, hanome voninahitra sy hipetraka amin'ny alalan'ny aterineto, anilan'ireo nodimandry ireo.